Madaxweyne Deni oo maanta shaacinayo liiska musharraxiinta Aqalka Sare - Allbanaadir
Home Xogta Dahsoon Madaxweyne Deni oo maanta shaacinayo liiska musharraxiinta Aqalka Sare
Madaxweyne Deni oo maanta shaacinayo liiska musharraxiinta Aqalka Sare
Wararka laga helayo Garoowe ayaa sheegaya in saacadaha soo socda la filayo in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullahi Deni uu ku dhawaaqayo liiska xubnaha musharraxiinta ee Aqalka Sare ku metalaya maamulkaasi.
Deni ayaa haatan wada wada-tashiyadii ugu dambeeyey ee la xiriira shaacinta xubnaha u sharraxan Puntland Senatorada ay ku yeelaneyso Aqalka Sare ee afarta sano ee socota.
Sidoo kale wararka ayaa intaasi kusii daraya in Saciid Deni uu xalay kulan gaar ah la qaatay guddoonka iyo xildhibaannada golaha wakiilada Puntland, isaga oo kala hadlay sidii loo bilaabi lahaa doorashada Aqalka Sare ee Puntland, si loo dhaqan-geliyo jadwalkii hore.
Sida ay ogaatay Badweytims waxaa suuragal ah in liiskan ay iska waayaan qaar ka mid ah Senatorada haatan Puntland ku metala Aqalka Sare ee Soomaaliya.
Garoowe ayaa waxaa sidoo kale muddooyinkii dambe ka socday kulamo xasaasi ah oo looga hadlayey arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan tan xildhibaanada labada Aqal.
Puntland ayaa ka mid ah maamullada ka daahay qabashada doorashada Aqalka Sare, waxaana isa soo tarayey baaqyada loo dirayey ee ku aadan bilaabista doorashooyinka.
Si kastaba Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ayaa noqday maamulladii ugu horreeyey ee ku guuleysta bilaabista soo xulista Senatotada cusub, kuwaas oo qaarkood lagu doortay magaalooyinka Kismaayo iyo Baydhabo oo xarumo KMG u ah labadaasi maamul goboleed.